एक हजार ४२ कोरोना भाइरसका संक्रमित को को (विवरणसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १५ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित संख्या १ हजार ४२ पुगेका छन् । आज एकै दिन १५६ कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएपछि संख्या एक हजार नाघेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलेसंक्रमितमध्ये ९४० पुरुष र १०२ महिला रहेको जानकारी दिएको छ ।
देशमा १५ दिनमा संक्रमित चार गुना बढेर एक हजार नाघेका हो । आज कोरोना संक्रमितको किर्तिमानी संख्या वृद्धि हो । यसअघि हिजो ११४ जना कोरोना संक्रमित बढेका थिए ।
यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हिजो किष्ट मेडिकल कलेज ग्वार्कोमा मृत्यु भएका ५६ वर्षीय पुरुषलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि गरेका छन् । मृतक ललितपुर महानगरपालिका बुङमती घर भएका हुन् ।
हालसम्म ५१ जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन् । आज सोलुखुम्बुमा पनि संक्रमित भेटिएका छन् ।
५९. बाँके, नेपालगञ्जका ६० वर्षीय पुरुष, भारत नयाँ दिल्लीस्थित निजामुद्दीन मर्कस जमातका उनी मस्जिद र मदरसाको सम्पर्कमा पुगेका थिए । खजुरास्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचार, १९ वैशाखमा पत्ता लागेको, डिस्चार्ज
६१. बाँके, नेपालगञ्जकी ७ वर्षीया बालिका । १९ वैशाखमा पत्ता लागेको जमातीको सम्पर्कमा आएका । खजुरास्थित सुशील कोइराला अस्पतालमा उपचार । २१ वैशाखमा पत्ता लागेको, डिस्चार्ज
६३. बाँके, नेपालगञ्जका पुरुष । १९ वैशाखमा पत्ता लागेको जमातीको सम्पर्कमा आएका । खजुरास्थित सुशील कोइराला अस्पतालमा उपचार । २१ वैशाखमा पत्ता लागेको, डिस्चार्ज
७४. बाँके, नेपालगञ्ज ८ की ५५ वर्षीया महिला । १९ वैशाखमा पत्ता लागेको जमातीको सम्पर्कमा आएका । खजुरास्थित सुशील कोइराला अस्पतालमा उपचार । २१ वैशाखमा पत्ता लागेको, डिस्चार्ज
६८३. महोत्तरी मनहराका ३० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६८४. महोत्तरी मनहराका ३५ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६८५. जुम्ला घर भई बारामा कार्यरत ३५ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६८६. जुम्ला घर भई बारामा कार्यरत ३६ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६८७. बाराका १९ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६८८. बाराका ३० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६८९. बाराका ३५ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९०. रौतहट गौरका २१ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९१.रौतहट गौरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९२. रौतहट गौरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९३. रौतहट गौरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९४. रौतहट गौरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९५. रौतहट गौरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९६. रौतहट गौरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९७. रौतहट गौरकीकी महिला, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९८. रौतहटका १८ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
६९९. रौतहटका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७००. रौतहटका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७०१. रौतहटका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७०२. रौतहटका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७०३. रौतहटका ४१ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७०४. रौतहट करुणियाका २६ पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७०५. रौतहट करुणियाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७०६. रौतहट करुणियाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७०७. रौतहट करुणियाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७०८. रौतहट करुणियाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७०९. रौतहट करुणियाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७१०. रौतहट राजदेवीका २२ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७११. रौतहट करुणियाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७१२. रौतहट गरुडाका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेका
७१३. सिराहा नवराजपुरका १८ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७१४. सिराहा भगवानपुरका २५ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७१५. सिराहा भगवानपुरका २९ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७१६. सिराहा भगवानपुरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७१७. सिराहा भगवानपुरका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७१८. धनुषाका २२ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७१९. बाँकेका २२ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२०. कपिलवस्तु मायादेवीका २२ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२१. कपिलवस्तु मायादेवीका ५० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२२. अर्घाखाँचीका १९ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२३. अर्घाखाँचीका ४३ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२४. गुल्मीका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२५. गुल्मीका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२६. रुपन्देही अस्पतालका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२७. कैलालीका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२८. अछामका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७२९. स्याङ्जाका २० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३०. स्याङ्जाका २९ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३१. सुर्खेतका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३२. सुर्खेतका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३३. सुर्खेतका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३४. सुर्खेतका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३५. सुर्खेतका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३६. सुर्खेतकी महिला, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३७. सुर्खेतका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३८. सुर्खेतका १६ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७३९. सुर्खेतका १७ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४०. सुर्खेतका ३५ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४१. सुर्खेतका ४९ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४२. बाँके डुडुवाका २० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४३. बाँके डुडुवाका २१ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४४. बाँके डुडुवाका ३६ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४५. बाँके राप्ती सोनारीका ४० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४६. बाँके राप्ती सोनारीका ४६ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४७. बाँके राप्ती सोनारीका ३८ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४८. बाँके बैजनाथका ३० वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७४९. कपिलवस्तुकी २ वर्षीया बालिका, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५०. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५१. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५२. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५३. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५४. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५५. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५६. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५७. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५८. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७५९. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६०. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६१. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६२. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६३. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६४. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६५. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६६. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६७. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६८. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७६९. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७७०. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७७१. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७७२. कपिलवस्तुका पुरुष, १३ जेठमा पत्ता लागेको
७७३. सप्तरी बोडेबसाइका ५६ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७७४. सप्तरी बोडेबसाइका १८ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७७५. सप्तरी बोडेबसाइका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७७६. सप्तरी बोडेबसाइका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७७७. सप्तरी बोडेबसाइका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७७८. सप्तरी बोडेबसाइका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७७९. सप्तरी बोडेबसाइका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८०. सप्तरी बोडेबसाइका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८१.सप्तरी बालनबेहुलका १७ वर्षीया महिला, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८२. सप्तरी बालनबेहुलका २९ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८३. सप्तरी सुरंगाका २९ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८४. झापा गौरादहका २६ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८५ झापा गौरादहका ४१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८६. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८७. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८८. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७८९. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९०. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९१. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९२. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९३. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९४. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९५. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९६. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९७. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९८. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
७९९. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८००. झापा कचनकवलका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०१. मकवानपुर हेटौडाकी २५ वर्षीया महिला, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०२. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०३. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०४. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०५. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०६. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०७. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०८. रौतहट गढीमाईका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८०९. बाग्लुङ तमानखोलाका २१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१०. बाग्लुङ तमानखोलाका २१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८११. बाग्लुङ तमानखोलाका २७ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१२. बाग्लुङ तमानखोलाका २१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१३. बाग्लुङ बडीगाडका १९ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१४. बाग्लुङ बडीगाडका २० वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१५. रुकुमपूर्व उथाउथलका १५ वर्षीया महिला, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१६. रुकुमपूर्व उथाउथलका १८ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१७. रुकुमपूर्व उथाउथलका २३ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१८. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८१९. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२०. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२१. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२२. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२३. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२४. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२५. दाङ घोराहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२६. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२७. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२८. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८२९. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३०. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३१. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३२. दाङ लमहीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३३. दाङ लमहीका महिला, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३४. बाँके डुडुवाका २१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३५. बाँके डुडुवाका ३० वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३६. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३७. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३८. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८३९. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४०. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४१. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४२. बाँके राप्ती सोनारीका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४३. बाँके बैजनाथका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४४. बाँके बैजनाथका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४५. बाँके बैजनाथका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४६. बाँके बैजनाथका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४७. बाँके बैजनाथका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४८. बाँके बैजनाथका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८४९. बाँके खजुराका २९ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५०. सिराहा सिद्धिचरणका ३९ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५१. सिराहा घर भई सप्तरीमा रहेका ३५ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५२. बारा रचौताकी ५२ वर्षीया महिला, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५३. बारा रचौताका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५४. बारा रचौताका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५५. बारा रचौताका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५६. बारा रचौताका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५७. बारा रचौताका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५८. बारा रचौताका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८५९. रौतहट घर भइ हाल बारा रचौताका ४१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६०. रौतहट गौरका ३५ वर्षीया महिला, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६१. रौतहट गौरका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६२. रौतहट गौरका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६३. रौतहट गौरका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६४.रौतहट गौरका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६५.रौतहट गौरका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६६.रौतहट गौरका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६७.रौतहट देवाही गोनाहीका २१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६८.रौतहट देवाही गोनाहीका ३५ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८६९.रौतहट देवाही गोनाहीका २१ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७०. रौतहट कटहरियाका २७ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७१. रौतहट कटहरियाका ३६ वर्षीय पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७२. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७३.रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७४. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७५. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७६. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७७. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७८. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८७९. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८०. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८१. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८२. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८३. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८४. रौतहटको श्री जनता माविको क्वारेन्टाइनका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८५. रौतहटको मदरसाका पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८६. रौतहटको मदरसा पुरुष, १४ जेठमा पत्ता लागेको
८८८.सप्तरीका ३२ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेका
८८९. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९०. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९१. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९२. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९३. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९४. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९५.झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९६. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९७. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९८. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
८९९. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९००. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०१. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०२. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०३. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०४. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०५. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०६. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०७. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०८. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९०९. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१०. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९११. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१२. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१३. झापाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१४. नवलपुरमा १९ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१५. धनुषाकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१६. धनुषाकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१७. धनुषाकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१८. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९१९. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२०. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२२. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२३. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२४. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२५. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२६. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२७. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२८. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९२९. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३०. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३१. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३२. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३३. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३४. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३५. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३६. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३७. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३८. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९३९. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४०. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४१. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४२. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४३. धनुषाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४४. महोत्तरीकी ४५ वर्षीया महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४५. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४६. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४७. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४८. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९४९. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५०. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५१. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५२. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५३. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५४. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५५. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५६. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५७. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५८. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९५९. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६०. महोत्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६१. रौतहटका १२ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६२. रौतहटका ३० वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६४. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६५. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६६. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६७. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६८. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९६९. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७०. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७१. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७२. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७३. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७४. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७५. सप्तरीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७६. सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७७.सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७८.सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९७९.सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८०.सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८१.सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८२.सर्लाहीका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८३. सिराहाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८४.सिराहाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८५.सिराहाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८६. सिराहाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८७. सिराहाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८८. सिराहाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९८९. दोलखाका १९ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९०. दोलखाका २० वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९१. सोलुखुम्बुका २० वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९२. बझाङका ५५ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९३. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९४. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९५. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९६. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९७. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९८. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
९९९. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०००. सुर्खेतका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००१. सुर्खेतकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००२. सुर्खेतकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००३. सुर्खेतकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००४. सुर्खेतकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००५. सुर्खेतकी बालिका, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००६. सुर्खेतकी बालिका, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००७. दैलेखकी महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००८. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१००९. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१०. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०११. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१२. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१३. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१४. दैलेखका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१५. स्याङजाकी ३९ वर्षीया महिला, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१६. स्याङ्जाका २२ वर्षका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१७. स्याङ्जाका २६ वर्षका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१८. दार्चुलाका २५ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०१९. कैलालीका २५ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२०. कैलालीका ३० वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२१. मकवानपुरका ५० वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२२. बर्दियाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२३. बर्दियाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२४. बर्दियाका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२५. बाँकेका २८ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२६. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२७. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२८. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०२९. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३०. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३१. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३२. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३३. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३४. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३५. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३६. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३७. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३८. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०३९. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०४०. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०४१. रौतहटका पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको
१०४२. सप्तरीका ४७ वर्षीय पुरुष, १५ जेठमा पत्ता लागेको